Warsan iyo Wargeysyada Dunida Waxey ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda | warsanradio baydhabo
Home CIYAARAHA	Warsan iyo Wargeysyada Dunida Waxey ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
Warsan iyo Wargeysyada Dunida Waxey ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda
written by Ateera 22/01/2019
Kulan Wanagsan Asxaabta Ciyaaraha Jecel Wxaa her Qabagabo ah marayaan Suuqa kala Iibsiga Ciyaartooyda Kubada Cagta Manta iyo Suuqa Kala Iibsiga
Manchester United ayaa doorbideysa inay marka hore soo shaqo galiso Agaasime Ciyaaraha ah ka hor go’aanka muhiimka ah ay xagaaga ku magacaabeyso Tababaraha joogtada ee kooxda. (Independent)
West Ham ayaa weeraryahankeeda Marko Arnautovic, 29-jir u sheegtay inay u ogolaaneyso inuu kooxda ka tago suuqa xagaaga balse aysan iibineyn bishan Janaayo xitaa haddii uu laacibka reer Austria diido inuu ciyaaro. (London Evening Standard)
Bayern Munich ayaa diyaar u ah inay dalab 10-milyan ah ka gudbiso weeraryahanka reer Wales ee kooxda Manchester City Rabbi Matondo, 18-jir kaa uu qandaraaskiisu dhacayo dhammaadka kal ciyaareedka (Sun)
Kooxda Atalanta ayaa West Ham ka soo diiday dalab 40-milyan oo euro ay ka soo gudbisay weeraryahankeeda reer Colombia Duvan Zapata, 27-jir. (Tuttosport)
Weeraryahanka Chelsea Alvaro Morata ayaa la filayaa inuu heshiis amaah ah inta ka harsan xilli ciyaareedka ugu biiro Atletico Madrid iyadoo kooxda reer Spain ay heysan doonto dooqa ah inay si toos ah u iibsan karto 26-jirka. (Sky Sports)
Kabtanka PSG Thiago SIlva ayaa sheegay inay qalad noqon doonto in kooxda laga diro xiddiga qadka dhexe reer France Adrien Rabiot . 23-jirka ayaa bartilmaameed u ah kooxo badan oo ka dhisan Premier League. (Telefoot)
Weeraryahanka Fulham Aboubakar Kamara, 23-jir, ayaa wada hadalo uu amaah ugu biirayo inta ka harsan kal ciyaareedka kula jira kooxda reer Turkish ee Yeni Malatyaspor. (Mail)
Waayaha Kamara ee Fulham ayaa u muuqda kuwa soo afjarmay kaddib markii Weeraryahanka lagu amaray inuu tababarka la qaato 23-jirada kooxda. (Telegraph)
Liverpool ayaa la filayaa inay noqoto naadigii ugu horreeyay adduunka ee ka warbixisa faa’iido sanadle ah oo ka badan 100 milyan oo euro (88.3-milyan oo bound). (Telegraph)
Weeraryahanka Manchester United Romelu Lukaku 25-jir ayaa baraha bulshada soo dhigay canaan aad u adag taa oo u muuqata inuu ku diidan yahay wararka xanta ah inuu u dhaqaaqayo Juventus.. (Star)
Warsan iyo Wargeysyada Dunida Waxey ka qoreen Suuqa kala iibsiga Ciyaartoyda was last modified: January 22nd, 2019 by Ateera
DEG DEG: Kulankii Man City & Man United Ee Maanta Ka Dhici Lahaa Dalka Shiinaha Oo La Kansalay & Sababta Oo La Shaaciyay.
Daawo Sawiro:Tartanka Kubadda Cagta ee Maamullada Dalka oo si habsami leh uga socda Muqdisho